Abu Dhabi na Egypt na Nigeria: Etihad Airways na-egosi obi ike
Location: Mbido » Ịdee » Airlines » Abu Dhabi na Egypt na Nigeria: Etihad Airways na-egosi obi ike
Etihad Airways na-agbakwunye ụgbọ elu kwa afọ n'etiti etiti Abu Dhabi na Cairo na Lagos ka emechara n'afọ a iji gboo mkpa na-arịwanye elu na United Arab Emirates.
A ga -ewebata ọrụ nke ise a na -eme kwa ụbọchị n'okporo ụzọ Cairo, dị irè 1 Ọktoba 2017, na -eburu ugboro ugboro n'isi obodo Egypt site na ụgbọ elu 28 ruo 35 kwa izu. Ọpụpụ etiti abalị ọhụrụ site na Abu Dhabi na ịlaghachi ọrụ ehihie si Cairo ga-enye ndị ọbịa mpaghara n'ahịa ọ bụla nhọrọ ọzọ na-eme njem n'etiti isi obodo abụọ ahụ.
N'ime ọnwa njem kacha elu na -abịanụ, Etihad Airways ga -achọ ka achọrọ ya ugboro ugboro n'okporo ụzọ Cairo tupu ọrụ nke ise kwa ụbọchị na -adịgide adịgide na Ọktọba. Ọrụ ọhụrụ a ga -enyekwa njikọ dị mma na Abu Dhabi gaa na site na isi obodo na North na South Asia, gụnyere Beijing, Hong Kong, Shanghai, Jakarta na Kuala Lumpur.
Ụgbọ elu Satọdee ọhụrụ ga -aga isi obodo azụmaahịa Naịjirịa nke Legọs, malite na Disemba 2, 2017,
na -agbakwụnye na nhọrọ njem izu ụka, na -abawanye ugboro ugboro site na ọrụ anọ ruo ise kwa izu, ma na -enye ndị njem mpaghara mgbanwe na ịdị mma ka ukwuu. Ọrụ n'isi ụtụtụ site na Abu Dhabi na ịlaghachi n'ụgbọ elu na-apụ na Lagos ga-ahụkwa njikọ dị mma na site na Eshia na Subcontinent India. Obodo nri nri a ma ama gụnyere Bengaluru, Chennai, Delhi, Mumbai na Kuala Lumpur.
N'azụ akụ na ụba Naịjirịa na Egypt na -ebilite, ụgbọ elu na -ahụ ugboro ole na -abawanye n'ahịa abụọ ahụ dị ka oge kwesịrị inye ndị ọbịa nhọrọ dị ukwuu.
Azụmaahịa abụọ n'etiti UAE na Egypt ruru nde US $ 400 n'afọ gara aga. A na -atụ anya na mmụba GDP n'Ijipt ga -abụ pasent 3.5 n'afọ a, na -ebili rue 4.5 pasent na 2018. A na -atụkwa anya na ndị na -abata njem nleta na Egypt ga -abawanye site na ọkwa afọ gara aga nke nde 5 ruo 5.4m n'afọ a, na n'ihu ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 6m na 2018.
A na -atụ anya na ọnụ ọgụgụ GDP nke Naịjirịa ga -amụba karịa okpukpu abụọ site na 0.83 pasent n'afọ a ruo 1.9 pasent na 2018 nke ukwuu n'ihi nrụpụta na -abawanye, ego na IT nke na -enyere mmanụ ọkụ aka inweta ikike ikuku mba ụwa.
Mohammad Al Bulooki, Etihad Airways Executive Vice President Commercial, kwuru, sị: “Cairo bụ isi ihe na -egosi ahịa site na Abu Dhabi na -enwe mmụba nke njem ndị njem na Egypt. Fgbọ elu anyị gbakwunyere na -egosi mkpa nke njikọ akụkọ ihe mere eme siri ike n'etiti UAE na Egypt, yana nkwado anyị na -aga n'ihu maka uto nke azụmaahịa abụọ na ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke Egypt.
“Lagos bụ otu n'ime ahịa anyị kacha ukwuu na Sub-Saharan Africa nke na-egosi akara ike ka Naịjirịa na-agbake site na nlaazu ego. N'ime ụdị ọnọdụ a, ụgbọ elu anyị ndị ọzọ ga -enyere aka ịkwalite uto ahụ. Site na ịdị mma ọnọdụ ala Abu Dhabi, anyị na -enye njikọ ụgbọ elu na -abịa n'oge n'etiti isi obodo anyị na UAE na Cairo na Lagos maka abamuru nke ndị njem anyị na ngagharị nke ibu. "
Cairo Nhazi oge site na 1 Ọktoba 2017:
Gbọ elu Mba Mmalite Hapụ Ebe Abịa Frequency
NXU 651 Abu Dhabi 03: 10 Cairo
NXU 650 Cairo 06: 00 Abu Dhabi 11: 40 Daily
NXU 653 Abu Dhabi 09: 45 Cairo
NXU 654 Cairo 13: 10 Abu Dhabi 18: 55 Daily
NK647 * Abu Dhabi 10: 50 Cairo
NK648 * Cairo 14: 45 Abu Dhabi 20: 30 Daily
NXU 655 Abu Dhabi 14: 20 Cairo
NXU 656 Cairo 17: 40 Abu Dhabi 23: 25 Daily
NXU 657 Abu Dhabi 21: 55 Cairo
NXU 658 Cairo 00: 50 Abu Dhabi 06:30 +1 Daily
Lagos Nhazi oge site na 2 Disemba 2017:
NXU 673 Abu Dhabi 02: 30 Lagos
Mọnde Wenezde Fraịdee Satọde * Sọnde
NXU 674 Lagos 09: 00 Abu Dhabi 19: 50 Mọnde Wenezde Fraịdee Satọde * Sọnde
Portzọ okporo ụzọ Fraport - June na ọkara nke mbụ 2017: Ọdụ ụgbọ elu Frankfurt rụzuru ihe ndekọ ọhụụ
Spain - Jamaica Tourism: Bartlett Chọrọ Ọzọ Site na Tourist Dollar
Nhọrọ nyocha ọhụrụ maka ndị ọrịa nọ n'ihe ize ndụ dị elu maka ...
Ọnụ ego dị elu nke ịnwụ anwụ
Air Astana na-ekwupụta uru ahụike, maliteghachi London…
Rọshịa mechiri mbara ikuku ya na Bulgarian, Czech na...
Ndị ọrụ Saudia Cargo na Cainiao Network